Mogadishu Journal » Nin Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaannada Baarlamanka gobolka Nova Scotia
Nin Soomaali ah oo ka mid noqday xildhibaannada Baarlamanka gobolka Nova Scotia
Muwaadin asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya hadana heesta dhalashada dalka Canada ayaa ku guuleestay in uu noqdo xildhibaannad katirsan Baarlamanka gobolka Nova Scotia ee dalka Canada.
Cali Ducaale oo qaxooti ahaan ku tagay dalka Canada, ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Muslim ah, Soomaali ah oo kamid noqda Baarlamanka gobolka Nova Scotia, waxa uuna ninkan Soomaaliga ah guul taariijhi ah ka gaaray doorashada dhacday.
Ninkan Soomaaliga ah ayaa horey uga shaqeyn jiray dab damiska ayaa taageero badan ka helay xaafadda laga doortay ee Halifax Armdale, waxa uuna helay 40.2% codadkii la dhiibtay.
Soomaali badan oo kunool qurbaha gaar ahaan dalalka Canada iyo Mareykannka ayaa xubno ka noqday Baarlamaanbkada dalalkaasi gaar ahaan kuwa gobolada iyo kuwa heer federaal.
Axmed Madoobe oo galabta soo gaaray Muqdisho laguna soo dhaweeyay ( Daawo Sawirada)